Xidiga Manchester United ee Cristiano Ronaldo oo wadahadalo Gaar ah la yeeshay Jorge Mendes. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Xidiga Manchester United ee Cristiano Ronaldo oo wadahadalo Gaar ah la yeeshay...
Xidiga Manchester United ee Cristiano Ronaldo oo wadahadalo Gaar ah la yeeshay Jorge Mendes.
weerarka Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu wadahadalo la yeeshay Jorge Mendes oo ku mustaqbalka Old Trafford.
Ciyaaryahanka shanta jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa ku faanay 14 gool iyo seddex caawin 21 kulan oo uu ciyaaray inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkiisa labaad ee kooxda, laakiin kooxda Ralf Rangnick ayaa ku dhibtooneysa inay qaab ciyaareed wada jir ah soo bandhigto, waxaana ay afar dhibcood u jiraan boosaska Champions League.
Ku soo laabashada Ronaldo ee Old Trafford ayaa loo malaynayaa inay keentay xiisad sida laga soo xigtay The Sun , wakiilka Mendes ayaa hadda u yimid wadahadalo degdeg ah oo ku saabsan mustaqbalkiisa.
Illo muhiim ah ayaa u sheegay Thesun: “Cristiano aad ayuu uga walaacsan yahay waxa ka dhacaya United, kooxdu waxay helaysaa dhaleecayn badan, wuuna ogyahay in loo arko mid ka mid ah hogaamiyayaasha.
“Waxaa jira dhibaatooyin badan, Cristiano waxa uu dareemaya cadaadis aad ayuuna uga walaacsan yahay xaalada, waxa uu si aad ah u doonayaa in u dhaqaaqistiisa United ay noqoto mid guul ah, laakiin waxa uu bilaabay inuu aqoonsado in koobab uu ku guuleysto kooxda ay tahay mid adag.
Mustaqbalka Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa inuu ku xiran yahay qofka bedeli doona Rangnick si uu u noqdo tababaraha joogtada ah ee Man United, iyadoo Portuguese-ka uu qandaraaskiisa Old Trafford kula jiro ilaa 2023.
Madaxweynaha kooxda Barcelona ee Joan Laporta: “Barcelona ma rabto inay iibiso Frenkie de Jong”
Mohamed Salah u Dib ugu laabanaaya Chelsea ka hor inta uusan saxiixin heshiis cusub oo Liverpool ah
Jesse Lingard oo dhexda kasoo gashay Saxiixa Jesse Lingard
Man Utd oo miiska saartay dalabkii ugu horeeyay ee daafaca Ajax Lisandro Martinez
Louis Saha oo fariin adag u diray Xidiga Ronaldo ee Kooxda Manchester United
Neymar oo soo afjaray hadal heynta ku aadan inuu ka tagayo PSG
Horudhac: Villarreal Vs Real Madrid ee Horyaalka La Liga Spain, Wararka...
Real Madrid ayaa isku dayi doonta inay guul soo laabasho ah ka gaarto La Liga marka ay u safreyso Estadio de la Ceramica...
Guddiga doorashada heer federal oo shaaciyey in lagala wareegay barihii bulshada
Xilka loo magacaabay Cabdiraxman Cabdishakuur. Waxa ay ka dhigantahay magacaabistan, fursaddaha...
Xavi oo ka hadlay taageerayaashii ku jees jeesay Ousmane Dembele intii...
Badbaado Qaran iyo Baarlamaanka. Cismaan Xaadoole oo xisaabta buuxiyay.
Wasiir Cabdullaahi Maxamed Nuur oo u digay madaxda DOWLADDA + Sababta
Khasaaraha DAGAALKII Galgaduud oo kordhay iyo go’aanka GALMUDUG
Manchester City oo Qarka u saaran inay ku guuleysato Tartanka loogu...